Man travels the world with6sex dolls. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » Man travels the world with6sex dolls.
Man travels the world with6sex dolls.
Posted by Zaw Wonna on Jan 28, 2011 in News |3comments
Canada နိုင်ငံ Nova Scotia မှ အသက် ၅၇ နှစ်အရွယ် Hokey အမည်ရှိ အမျိုးသား တစ်ဦးသည် သူ၏ ဖျော်ဖြေရေးစက်ရုပ် ချစ်သူ ၆ ဦးနှင့်အတူ ဒေါ်လာ ၂၆၀၀၀ အကုန်အကျခံကာ အင်္ဂလန်နှင့် အမေရိကန်သို့ အပျော်ခရီး ထွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Hokey သည် အသက် ၂ နှစ်အရွယ် သားတစ်ယောက်၏ ဖခင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းကို သူ၏ ဇနီးသည်က ဝါသနာ တစ်ခုအနေဖြင့် နားလည်ပေးခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ အလုပ်မှ အားလပ်ရက်အတွင်း သူ၏ ဆီလီကွန် စက်ရုပ်ချစ်သူ Bianca နှင့်အတူ ၃၂၃၉ ဒေါ်လာခန့် ကုန်ကျသော ကောင်းကင် ဒိုင်ဗင်ထိုးခြင်း၊ မြင်းစီးခြင်း နှင့် Harley Davidson ဆိုင်ကယ် အတူစီးနင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
“ကျုပ်ရဲ့ ပထမဆုံး စက်ရုပ်ချစ်သူကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှာ ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ် …… သူတို့ဟာ အရမ်းကို ချစ်စရာ ကောင်းပါတယ် ……. ကျုပ်အထင်တော့ ဒီအရုပ်တွေဟာ အရမ်းကို ချောမောလှပပြီး အဲဒါကို မဟုတ်ပါဘူးလို့ ငြင်းဆိုတဲ့သူဟာ လိမ်ပြောတာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်” ဟု သူက ပြောဆိုခဲ့သည်။
Hokey သည် သူ၏ စက်ရုပ်ချစ်သူများအတွက် ၂၀၂၆ ဒေါ်လာ တန်ဖိုးရှိသော ဝတ်စုံများကို ဝယ်ယူကာ ဝတ်ဆင်စေခဲ့သည်။
Source: The Korean Herald/ ANN, Published Jan 27 2011
လောလောဆယ် အိမ်ထောင်ရေး အရှုပ်အရှင်း ကင်းတယ် (မိန်းမက သဘောတူလို့)
နောက်ဆက်တွဲ အမွေမှု ကင်းမယ် (ကလေးမရလို့)
နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါရဖို့ သိပ် မရှိဘူး (ဒါတောင် အရုပ်ကို မျှဝေခံစားမှု မပြုဖို့ လိုတယ်)
အိမ်က မိန်းမ စဉ်းစားဖို့က ငါ ဒီ အရုပ်လောက် မကောင်း ဖြစ်နေလို့လား လို့
အင်း … ဒီမိန်းမတွေက တကယ့်သက်ရှိ မိန်းမလောက်တော့ နားပူနားဆာ (ဂျပူကိုက်) မလုပ်လောက်ဘူးလို့ ထင်ရတာပဲ …..
နောက်ပြီး ယောက္ခမဆိုတဲ့ မီးတစ်မီးလည်း ငြိမ်းတာတော့ အမှန်ပဲဗျ ……
လူပျိုကြီးများ ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ပါပဲ …..
ဟုတ်ပါ့ ယောက္ခမဒဏ် ယောက်ဖ ဒဏ်မခံရသလို မိန်းမတွေလို နားပူနားဆာ မလုပ်နိုင်ဘူး ပြီးတော့ ကိုယ်ရှာထားတာနဲ့ လုံလောက်အောင် ဆင်ရုံပဲ အသစ်ထွက်တိုင်း ဂျီတိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး မိုက်တယ် တစ်ရုပ်လောက် ၀ယ်ဦးမှ